July Dream: Myths about blood donation
Posted by JulyDream at 10:41 PM
သွေးလှူခြင်းကြောင့် အလှူရှင်မှာ သွေးအားနည်းစေတယ်။ ရောဂါတွေ ကူးစက်လွယ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေလည်း စွဲဝင်နေတုန်းပါပဲ။
သွေးတစ်ခါလှူပြီးရင် နောက်တစ်ခါ သွေးမလှူမရ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူမျိုးတွေလည်း ရှိနေတုန်းပါပဲ။
သွေးလှူမယ်လို့ပြောတိုင်းအံအားတသင့်နဲ့ ကြည့်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရတုန်းပါပဲ။
မိမိရဲ့ သွေးနဲ့ သူတစ်ပါးရဲ့ အသက်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကျနော်တော့ ဆက်လက်လှူဒါန်းနေဦးမှာပါ။
သွေးလှုခြင်းဟာ တကယ်မွန်မြတ်တဲ့ အလှုဒါန ပါ ... ဘယ်ဘာသာတရားကမှ မတားမြစ်ထားပါဘူးနော် .. အခုလို ဖတ်ရလို့လဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
သွေးလှူချင်သော်လည်း Hepatitis B Carrier ဖြစ်နေသောကြောင့်................................................................
ဒီပိုစ့်အတွက် အထူးကျေးဇူးပါ July Dream
ကူးယူသွားပါရစေနော်။ အလျင်းသင့်ရင်လည်း ဘလော့မှာတင်ချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြု မပြုပြောပေးပါ။
အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။ တင်ပြတဲ့အချက်တွေလည်း ကောင်းပါတယ်။
တခါပြောဖူးတဲ့အတိုင်း အိပ်ချိန်ကနည်း၊ လူက ပိန်ညောင်၊ အစားအသောက်က မမှန်နဲ့ကို လူရုပ်မပေါက်အောင် ဖြစ်နေလုိ့ ဘယ်ခါမှများ သွေးလှူနိုင်ပါလိမ့်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးမလှူဖြစ်ရင်တောင် ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်း လှူနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ပါရဲ့ အစ်ကိုရေ။ ဒီပို့စ်လေးကို ခွင့်ပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ..ဖော်ဝက်ဒ် လုပ်ချင်ပါသည်။ လုပ်လိုက်ပြီ။
မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဒါန တခု အတွက် ကောင်းမွန်လှတဲ့
ပို့စ်လေးပါ မောင်လေး ရေ
သွေးက တဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ကင်းစင်နေမှ လှူခွင့်ရတော့မှာ
သွေးဘဏ်တွေ နေရာတကာ မှာ အလွယ်တကူ ရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာတော့ သွေးလှူဖှို နဲ့ သွေးရဖို့ ဆိုတာ အခက်အခဲ မရှိလှပေမဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသတွေ နဲ့ နယ်မြို့လေးပေါင်း မြောက်များစွာမှာတော့ သွေးလိုတဲ့ လူနာတွေ ဟာ ပြသနာပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရရှာတယ်
၁။ မြန်မာနိုင်ငံက လူအများစု က ကိုယ့်သွေးအုပ်စု က ဘာလဲ ဆိုတာ စစ်ထားတဲ့ အလေ့အထ နည်းတဲ့အတွက် တိုက်နယ်ဆေးရုံတေ ဒါမှ မဟုတ်လဲ မြို့နယ်သေးသေး လေးတွေမှာ သွေးလိုတဲ့လူနာ ရှိနေရင် လှူမဲ့လူ လဲ ရှိနေရက်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ သွေး အမျိုးအစား ရနိုင်ဖို့ ခက်ပြန်တယ်။
၂။ သွေးကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကလဲ ကျေးလက်ဒေသတွေနဲ့ မြို့ငယ်လေးတွေဆီမှာ ပြန့်နေပြီ ဖြစ်လို့ သွေးအမျိုးအစား ရပြန်တော့လဲ ရောဂါတွေ မစစ်နိုင်ခဲ့လို့ သွေးသွင်းခံ လူနာတွေ ရောဂါ ကူးစက်ခံရတာ ဒုနဲ့ ဒေးဖြစ်ကုန်ပြီ။
၃။ သွေးအမျိုးအစားလဲ သိ၊ ရောဂါတွေလဲ စစ်နိုင်တယ် ထားအုံး ကိုယ်လျူချင်တဲ့ အချိန်လှူလို့ မရနိုင်ပြန်ဘူး၊ လျှပ်စစ်မီးဆိုတာ နတ်သမီးမစင်လောက်ရှားပါးနေတာမို့ သွေးတွေ ထိမ်းထားမဲ့ နေရာက ခက်ပြန်ရော..း(
Thanksalot. I have to donate second time in this month.
ဗဟုသုတရပါတယ်.... သွေးတစ်ခါမှ မလှုဖူးဘူး
အမ သွေးလှူ ချင်ပေမဲ့ သွေးပေါင် အမြဲ ကျနေလို့ သွားတိုင်းမ လှူရဘူး ၊ ဟိုမှာတုန်းကပေါ့၊ ဒီမှာတော့ တခါမှ မလှူဖူးဘူး၊